Vaovao - Dingana famokarana azo antoka ny varavarana sy ny varavarankely UPVC
Famokarana azo antoka ny varavarana sy ny varavarankely UPVC
1. Sary an-dàlana sy varavarankely
Voalohany indrindra, avereno jerena tsara ireo sary an-dàlana, fantaro ny karazana sy ny habetsaky ny fikandrana ilaina mifanaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny sary, ary farano
Izy io dia nohamarinina sy voafaritra halavany, ary natao araka ny karazany sy ny karazana varavarankely hafa hanatsarana ny tahan'ny fampiasana sy ny tahan'ny famokarana.
2. Dingana fiarovana
Ny mpiasa dia mila miakanjo tsara, manao vokatra fiantohana asa mifanaraka amin'ny filan'ny asa ary mifantoka amin'ny fisorohana lozam-pifamoivoizana. Voarara mafy ao amin'ny atrikasa ny pyrotechnics ary voarara ny sigara rehetra.
3. fanapahana profil, lavaka fikosoham-bary, lavaka fanalahidy
A.Ny bikan'ny piraofilina ankapobeny dia mazàna manaparitaka banga mitre rojo. Avelao ny 2.5mm ~ 3mm isaky ny faran'ny fitaovana toy ny sisin-tany, ary eo ambanin'ny welding. Ny fandeferana ara-materialy dia tokony fehezina ao anatin'ny 1mm, ary ny fandeferana amin'ny zoro dia tokony fehezina ao anatin'ny 0,5 degre.
B.Ny mombamomba ny frame dia tokony hasiana lavaka fanodinana, ary ny karazana mpankafy dia tokony hasiana lavaka fanodinana sy lavaka fandanjana ny tsindry amin'ny rivotra. Ny savaivon'ny lavaka fanondrahana dia takiana ho 5mm, 30mm ny halavany, ny lavaka fanatobiana dia tsy tokony hapetraka ao anaty lavaka miaraka amin'ny vy mirakotra, ary tsy afaka miditra amin'ny lavaka vy amin'ny vy.
C. Raha te hametraka ny actuator sy ny hidim-baravarana ianao dia tsy maintsy mivezivezy ny lavaka fanalahidy
4. Fivoriamben'ny vy nohamafisina
Rehefa lehibe kokoa na mitovy amin'ny halavany voalaza ny haben'ny vavahady sy ny firafitry ny varavarankely, dia tokony ho vy misarona ny lavaka anatiny. Ankoatr'izay, ny fivorian'ny fitaovana Ny arofanina vy dia tsy maintsy ampiana amin'ireo fitambaran'ireo varavarana sy varavarankely mitambatra ary ireo fitambaran'ireo varavarana sy varavarankely mitambatra. Ary amboary. Ny vy vy amin'ny faritra misy fihenjanana amin'ny kofehy miendrika hazo fijaliana sy miendrika T dia tokony ho rehefa nesorina vao vita ilay lovia nohosorana rehefa avy niempo ilay faritra. Atsofohy eo am-piandohana ny vy vita amin'ny vy ary amboary aorian'ny fehikibo.
Ny fasteners ny vy sosona dia tsy tokony ho latsaky ny 3, ny elanelana tsy tokony ho lehibe kokoa noho ny 300mm, ary ny halavirana amin'ny faran'ny ny fizarana vy dia tsy tokony ho lehibe kokoa noho ny 100mm. Tokony tsy hisy latsaky ny lavaka fametahana tokana 3 (manamboatra sombintsombiny) amin'ny varavarankely iray manontolo, ny elanelana dia tsy tokony ho lehibe kokoa noho ny 500mm, ary ny halavirana amin'ny faran'ny varavarankely dia tsy tokony ho lehibe loatra. Amin'ny 150mm. Ny fifandraisana T miendrika T dia mila manana lavaka mihombo amin'ny 150mm amin'ny lafiny roa amin'ny fanohanana afovoany
Rehefa welding, tandremo ny mari-pana amin'ny welding 240-250 ° C, ny tsindry famahanana 0.3-0.35MPA, ny tsindry clamping 0.4-0.6MPA, ny fotoana fandehanana 20-30 segondra, ny fotoana mangatsiaka 25-30 segondra. Ny fandeferana amin'ny welding dia tokony fehezina ao anaty 2mm Inside
6. Esory ny zorony, apetaho ny kofehy vita amin'ny fingotra
A. Ny fanadiovana zoro dia mizara ho fanadiovana amin'ny tanana sy fanadiovana mekanika. Aorian'ny fangejana, ny zoro dia azo diovina aorian'ny fampangatsiahana 30 minitra.
B. Frame, mpankafy ary fitaratra fitaratra, mametaka karazan-tampon-tsoroka matevina arakaraka ny takiana. Vatan-kazo, sombin-kofehy vita amin'ny kofehy;
Ny halavan'ny fehin-kibo dia tokony ho 1% eo ho eo intsony mba hisorohana ny fehin-kibo tsy hihena. Tsy misy fanalefahana, ala, na afovoany aorian'ny fametrahana ny tampon'ny fingotra
7. Fivorian'ny fitaovana
Ny vavahady vy sy plastika vita vita vita amin'ny plastika dia mivondrona ao anaty rindrina sy ny mpankafy amin'ny alàlan'ny fitaovana. Ny fitsipiky ny fivorian'ny fitaovana dia: Ny tanjaka ampy, ny toerana marina, ny fihaonana amin'ny lahasa isan-karazany ary mora soloina, ny fitaovana tokony hamboarina ao anaty karazana nohomboina nampidirina Ao amin'ny vy mirakotra, ny visy manamboatra fitaovana dia tokony hapetraka tanteraka, ary ny toerana fametrahana ny fitaovana tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny fenitra.
8. Fametrahana vera
Ao amin'ilay faritra hametrahana ny fitaratra, apetraho aloha ny vavahady fitaratra, apetaho eo amin'ilay sakana ny vera voakapa, ary avy eo ampitao ilay vera.
9. Famonosana vokatra vita ary fitsirihana kalitao
Alohan'ny hamoronana ny varavarana sy ny varavarankely ary hiala ao amin'ny orinasa, dia mila fonosina mba hisorohana ny fandotoana. Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny feo, fonosana tokana. Ny kasety fonosana tokana dia tsy latsaky ny teboka 3 ary ny elanelana dia tsy tokony ho lehibe mihoatra ny 600 mm. Aorian'ny fonosana, mariho ny haben'ny varavarankely amin'ny toerana malaza. Aorian'ny fanangonana ireo varavarana sy varavarankely plastika dia ilaina ny fanaraha-maso kalitao hentitra.
A.Fanaraha-maso ny endrika ivelany: ny faritra ambonin'ny varavarana sy ny varavarankely dia tokony ho malama, tsy misy bubble sy triatra, mitovy loko ny lokony, ary tokony malama ny lasitra, ary tsy tokony hisy soritra miharihary. Lesoka toy ny loto;
B. Fanaraha-maso ny haben'ny bika: fifehezana tanteraka ny kalitaon'ny varavarana sy ny varavarankely ao anatin'ny fiviliana azo avela amin'ny fenitra indostrialy;
C. Ireo kofehy famehezana dia mitovy amin'ny tampon-trano, tery ny tonon-taolana, ary tsy misy fisehoan-javatra mitete;
D.Ny valiny famehezana dia tokony hivory mafy, ary ny elanelana misy eo amin'ny zorony sy ny vitrana dia tsy tokony ho lehibe kokoa noho ny 1mm, ary tsy tokony ho eo amin'ny lafiny iray izy ireo. Ampiasao kofehy adhesive roa na maromaro;
E. Ny kojakoja momba ny fitaovana dia apetraka amin'ny toerana mety, feno ny habeny ary apetraka mafy.